Ithegi: ukubandakanyeka kwimidiya yoluntu | Martech Zone
Ithegi: ukubandakanyeka kwimidiya yoluntu
NgoLwesibini, nge-15 kaDisemba ngo-2020 NgoLwesibini, nge-15 kaDisemba ngo-2020 Douglas Karr
Kule veki, umthengi esidibana naye ebebuza ukuba kutheni umxholo abasebenza nzima kuwo ungabonakali wenza umohluko. Lo mthengi akakhange asebenze ukuphuhlisa oku kulandelayo kwimidiya yoluntu, endaweni yokusebenzisa uninzi lweenzame zabo kwintengiso ephumayo. Sibanike umfanekiso wobungakanani babaphulaphuli babo kumajelo asekuhlaleni ngokuthelekiswa nabo bakhuphisana nabo- emva koko banikezela ngefuthe ebenalo kwindlela
Isicwangciso seNtengiso yezeNtlalontle kwiiNqanaba ezi-6 ezilula
NgoLwesihlanu, Septemba 1, 2017 NgoLwesine, Agasti 31, 2017 Douglas Karr
Imidiya yokuncokola iyaqhubeka ukuqhubela phambili njengothungelwano, ukumamela, ukupapasha, inkxaso kunye nesixhobo sokukhuthaza amashishini. Intengiso yemithombo yeendaba kwezentlalo iqhubela phambili, ibonelela ngeendlela ezininzi kunye nokujolisa phambili okuhlisa iindleko ngokuzibandakanya. Amaqonga okuphulaphula, ukuphendula, ukupapasha, ukulinganisa, kunye nokwenza amaphulo asekiwe kwaye aqhubeka nokubonelela ngeminikelo emikhulu kumashishini. Ngobuninzi bamaqonga amajelo onxibelelwano ngoku afumanekayo, kulula ukuba ubhideke okanye ungaqiniseki ngendlela yokuphuhlisa
Usebenzisa njani iiHashtags ukonyusa ukufikelela kwiPhulo lakho
NgoLwesithathu, Agasti 31, 2016 NgoMgqibelo, uJanuwari 14, 2017 U-Jesse Quist
I-39% yamashishini ayilandeleli imikhankaso yabo yezentlalo kwaye ikhokelela kumathuba aphosiweyo. Ndiza kukubonisa indlela yokulandelela ngokufanelekileyo ii-hashtag ngexesha lemisitho, kunye neendlela onokuzisebenzisa ukwakha umkhankaso ofikelela ngokubanzi. Ndiza kugxila kwizinto ezimbini: Iimpawu ezibalulekileyo ekufuneka ulungele ukuzilinganisa xa uqhuba iphulo le-hashtag Amaqhinga alula onokuwasebenzisa ukwenza ukufikelela okubanzi kwiMetriki yeNtlalontle ebalulekileyo yeNtlalontle Uninzi lweemikhankaso zentlalo zenzelwe
Fikelela7: Bandakanya abaphulaphuli abathetha iilwimi ezininzi kwimidiya yoluntu
Lwesine, ngoFebruwari 25, 2016 NgoLwesihlanu, Februwari 26, 2016 Douglas Karr
I-Reach7 ifuna ukwenza kube lula kubantu ngabanye nakumashishini ukuba bandise ukufikelela kwabo kuluntu kwihlabathi liphela. Ngokufikelela kwi-7, abasebenzisi bachonga kwaye bazibandakanya nabaphulaphuli abafanelekileyo kwimidiya yoluntu ngokulula nangokufanelekileyo. Iqonga labo linceda abasebenzisi ukwakha abaphulaphuli abafanelekileyo kwimarike yabo yasekuhlaleni okanye basebenze ngokufanelekileyo ukuzibandakanya nemarike yehlabathi. Amashishini okanye abantu bayakwazi ukwenza ii-tweets kwii-80 zeelwimi ezithethwa kakhulu kwihlabathi. Iipesenti ezingama-90 zeenguqulelo zigqityiwe